အထွေထွေအခြေအနေများ Law & More B.V.
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း » အထွေထွေအခြေအနေများ
1. Law & More B.V., နယ်သာလန် Eindhoven မှာတည်ထောင်ခဲ့သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "အဖြစ်ရည်ညွှန်းLaw & More") သည်ဥပဒေရေးရာအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒတ်ခ်ျဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသောကန့်သတ်ချက်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ဤယေဘုယျအခြေအနေများသည်တာဝန်၏နိဂုံးမတိုင်မီအရေးအသားဖြင့်သဘောမတူပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထွေထွေဝယ်ယူမှုအခြေအနေသို့မဟုတ်သုံးစွဲသူအသုံးပြုသောအခြားအထွေထွေအခြေအနေများ၏သက်ဆိုင်မှုကိုအတိအလင်းဖယ်ထုတ်ထားသည်။
၃။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏တာဝန်အားလုံးကိုသီးသန့်လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်မည် Law & More။ ပုဒ်မ ၇း၄၀၇ အပိုဒ် ၂ ၏ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
4. Law & More ဒတ်ခ်ျရှေ့နေအစည်းအရုံး၏ကျင့် ၀ တ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီတာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖောက်သည်မှပေးအပ်ထားသည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရန်ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။
5. မှတာဝန်ပေးအပ်သည့်အလုပ်များနှင့်ဆက်စပ်။ လျှင် Law & More တတိယပါတီတွေပါ ၀ င်ရမယ်။ Law & More ကြိုတင် client ကိုတိုင်ပင်ပါလိမ့်မယ်။ Law & More ဤတတိယပါတီများမှချို့ယွင်းချက်များအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကြိုတင်ရေးသားထားသောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမပါဘဲနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ကိုယ်စား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကတာ ၀ န်ယူမှု၏ကန့်သတ်ချက်ကိုလက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Law & More.
6. မည်သည့်တာဝန်ယူမှုကို၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်ယူမှုကိုအာမခံအောက်မှာကြောင်းအထူးသဖြင့်အမှု၌ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုငွေပမာဏကန့်သတ်ထားသည် Law & More, ဒီအာမခံအောက်မှာနှုတ်ယူပြီးသားပိုလျှံခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အတွက်မဆိုငွေပေးချေမှုကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်ယူမှုအာမခံအောက်တွင်မလုပ်ပါကမည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုမဆိုယူရို ၅၀၀၀.5,000.00 ကန့်သတ်ထားသည်။ တောင်းဆိုချက်အရ Law & More အားဖြင့်ထုတ်ယူအဖြစ် (ထိုအောက်မှာလွှမ်းခြုံ) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်ယူမှုကိုအာမခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်သည် Law & More။ ဖောက်သည်သည်လျော်ကြေးပေးသည် Law & More နှင့်ရရှိထားသူ Law & More တာဝန်နှင့်ဆက်စပ်။ တတိယပါတီများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုဆန့်ကျင်အန္တရာယ်ကင်း။
၇။ တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူသည်ကြွေးတင်နေသည် Law & More တစ် ဦး အခကြေးငွေ (ပေါင်း VAT) ။ အဆိုပါအခကြေးငွေသက်ဆိုင်သောအလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းနှင့်မြှောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နာရီအရေအတွက်အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်သည်။ Law & More သူမ၏အလုပ်ချိန်နာရီကိုပုံမှန်အားဖြင့်ညှိယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈။ ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏကိုကန့်ကွက်စာဖြင့်ရေးသား။ တင်ပြရမည် Law & More ငွေတောင်းခံလွှာနေ့မှရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း၊ ပြေစာကိုပြတ်ပြတ်သားသားနှင့်ဆန္ဒပြခြင်းမရှိပဲလက်ခံလိမ့်မည်။
9. Law & More နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (Wwft) ကိုပြဌာန်းထားသည်။ အကယ်၍ တာ ၀ န်တစ်ခုသည် Wwft ၏နယ်ပယ်အတွင်းတွင်ကျရောက်လျှင်၊ Law & More တစ် ဦး client ကိုကြောင့်လုံ့လဝီရိယလုပ်ဆောင်သွားရန်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Wwft ၏အခြေအနေတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူမှုဖြစ်ပေါ်ပါက၊ Law & More ၎င်းကိုဒတ်ခ်ျဘဏ္Financialာရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သို့အစီရင်ခံရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများကို client မှထုတ်ဖော်မပေးပါ။
၁၀။ ဒတ်ခ်ျဥပဒေသည်ဆက်နွယ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည် Law & More နှင့် client ။
၁၁။ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့လျှင် Oost-Brabant ရှိဒတ်ခ်ျတရားရုံးသည်နားလည်မှုအပေါ်တွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် Law & More ဤရွေးချယ်မှုဖိုရမ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးသို့အငြင်းပွားမှုများကိုတင်ပြခွင့်ရှိသည်။
၁၂။ ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုမှုများအားတောင်းဆိုပိုင်ခွင့် Law & More၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှသတိပြုမိလာသည့်အချိန်သို့မဟုတ်ထိုအခွင့်အရေးများရှိကြောင်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသိနိုင်သည့် နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်းမည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆိုပယ်ဖျက်ရမည်။
13. ငွေတောင်းခံလွှာ Law & More အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန်မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေဖောက်သည်သို့ပေးပို့လိမ့်မည်။ ငွေတောင်းခံလွှာနေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်းဖြစ်ရမည်၊ မည်သည့်ဖောက်သည်သည်တရားဝင်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲတစ်လလျှင် ၁% ပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်မည်၊ တရားဝင်အသိပေးချက်မလိုပါ။ ။ ကဖျော်ဖြေအလုပ်အတွက် Law & Moreကြားဖြတ်ငွေပေးချေမှုများကိုအချိန်မရွေးငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့နိုင်သည်။ Law & More ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်ကငွေတောင်းခံလွှာကိုအချိန်မှန်ပေးရန်ပျက်ကွက်လျှင်၊ Law & More ရရှိလာသောထိခိုက်မှုများကိုပေးချေရန်မလိုအပ်ဘဲသူမ၏အလုပ်ကိုချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။